सुनसान भए ‘ठूला’ अस्पताल – Health Post Nepal
सुनसान भए ‘ठूला’ अस्पताल
२०७७ वैशाख १२ गते १०:१८
सबै तस्बिर : साैरभ रानाभाट र शिरिषमान महर्जन/ हेल्थपाेस्ट नेपाल
हरेक दिन भिडभाड हुने राजधानीका ठूला अस्पताल यतिबेला सुनसान छन्। लकडाउनसँगै अस्पतालमा भिडभाड निकै कम भएको हो।
सरकारले लकडाउन सुरु गर्नु अगावै अस्पतालहरूले अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक नआउन सूचना नै जारी गरेका थिए।
अधिकांश अस्पतालले चिकित्सक र विभागसँग टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट परामर्श सेवा सुरु गरेर ओपिडी बन्द गरेका छन्।
अहिले अस्पातलहरूले आकस्मिक टिकटमार्फत् ओपिडी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। यसबाट बिरामीले सास्तीमात्र्र पाएका छैनन्, अस्पताललाई समेत संकटमा पार्दै लगेको छ।
केही अस्पतालमा बिरामी कम भएसँगै आम्दानी घटेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको छ।
आकस्मिकबाहेक शल्यक्रिया बन्द : वीर अस्पताल
देशको सबैभन्दा पुरानो र जेठो वीर अस्पतालमा बिरामीको भीडभाड छैन। अन्य बेलामा काउन्टर अगाडि खुट्टा टेक्ने ठाउँसमेत अभाव हुने र घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने वीर हिजोआज सुनसान छ।
विगतमा २ हजार देखि २ हजार ५ सयमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेको वीरमा अचेल मुस्किलले ४० देखि ५० जना आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। आकस्मिकबाहेकको शल्यक्रिया बन्द अवस्थामा छ।
अस्पतलामा कूल ४ सय ६० बेड छन्। अहिले ६४ जना बिरामी भर्ना भएर बसेका छन्।
कोरोना आंशकामा दैनिक १० देखि १५ जना आउने गरेको वीरका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरी बताउँछन्। ‘हालसम्म पिसिआरबाट
५० जनाको परीक्षण गरेका छौं,’ डा. सेञ्चुरीले भने,‘सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।’
अस्पतालमा १ हजार ४ सय कूल जनशक्ति छ। जसमध्ये ८ सय नेपाल सरकारतर्फको दरबन्दी छ भने विकास समितितर्फ ६ सय छन्। बिरामी संख्या घटेसँगै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको डिउटीमा पनि कमी आएको छ।
‘बिदा कसैलाई बस्न दिएका छैनौं, डिउटीअनुसार काम हुने गरेको छ,’ डा. सेञ्चुरीले भने, ‘बिरामी संख्या हेरर चिकित्सक आउने गरेका छन्।’
कोरोना उपचारका लागि अस्पतालले पाँच आइसोलेसन बेड र दुई आइसियु बेड छुट्ट्याएको छ। आइसोलेसन बसेका बिरामी भेट्न चारजनाका दरले चार सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था भएको सेञ्चुरीले बताए।
अस्पतालमा कूल आइसियु बेड २३ बेड छ भने १८ भेन्टिलेटर छ।
तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा : कान्ति बाल अस्पताल
मुलुककै एकमात्र सरकारीस्तरको केन्द्रीय बाल अस्पतालमा यतिबेला कुर्न मिल्ने अप्रेसन बन्द अवस्थामा छ।
पहिलाको तुलनामा अस्पतालमा बिरामी चाप निकै कम छ। आकस्मिक र ओपिडीमा दैनिक ७० जनाहाराहारी आउने गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन्। अस्पतालका अनुसार अन्य बेला १ हजा २ सयहाराहारी बिरामी चाप हुन्थ्यो।
ओपिडीमा आउने बिरामीको संख्या घटे पनि आइसियुमा भने कमी नभएको डा. पौडेले बताए। ‘अन्य अस्पतालबाट रिफर भएका गम्भीर बिरामी आउने संख्या बढ्दो छ,’ पौडेलले भने, ‘आइसियुमा आउने बिरामीमा कमी छैन।’
लकडाउनसँगै बिरामी संख्या घट्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ।
‘अरू बेला दैनिक १ हजार २ सयहाराहारी बिरामी चाप हुन्थ्यो तर आजभोलि ७० देखि ७५ बिरामी आउने गरेका छन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘बिरामी संख्या घटेसँगै प्रयोगशाला, एक्सरेजस्ता सेवाको कमाइ पनि घट्यो।’
अस्पतालमा कूल ६ सय २२ कर्मचारी छन् भने विकास समितितर्फ ३ सय ७४ छन्।
डा. पौडेलका अनुसार विकास समितिका कर्मचारीको तलब प्रतिमहिना ८४ लाखहाराहारी हुन्छ। ‘हामीसँग बैंकमा यथेष्ट पैसा पनि छैन। पहिलादेखि नै घाटा भोगिरहेको छौं,’ उनले भने, ‘अस्पतालबाट कमाइ नभएपछि कसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने?’
पहिलाको तुलना अहिले तीन प्रतिशत पनि कमाइ भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँग अस्पतालको विषयमा कुराकानी भएको पौडेलले बताए। कोरोना आशंकामा गरिएको चारजनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा. पौडेलले बताए।
आकस्मिक टिकटबाट ओपिडी सेवा : शिक्षण अस्पताल
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले बिरामीलाई आकस्मिक टिकटबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। साधारण रोग लागेका बिरामीलाई आकस्मिक टिकटमार्फत् ओपिडी सेवा प्रदान गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्गा बताउँछन्। ‘फुल ओपिडी चलेको छैन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म आवश्यक नपरी अस्पताल नआउनू भनेका छौं।’
पहिला १ हजार ८ सयदेखि २ हजार ४ सय बिरामीले ओपिडी सेवा लिने गरेकामा आजभोलि १ सयहाराहारीमा ओपिडी सेवा लिने गरेका छन्। अस्पतालमा ६ सय ६४ बेड छ, जसमध्ये २ सय १५ जना भर्ना भएर उपचार लिइरहेका छन्। १ हजार ६ सयहाराहारी जनशक्ति छ।
‘आलोपालो गरेर सेवालाई निरन्तरता दिएका छौं,’ डा. खड्गाले भने, ‘काम परेको बेला चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल हाजिर भएका छन्।’
अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीलाई सकभर राख्न नखोजेको उनले बताए।
‘भर्ना गर्ने बिरामी छ भने मात्र राख्ने भनेका छौं, अहिलेसम्म आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आठ बेड तयारी अवस्थामा राखेका छौं।’ अस्पतालमा ११ मेन आइसियु छ भने ११ भन्टिलेटर छ।
कोरोना उपचार गर्न विशेष तयारी छ : पाटन अस्पताल
कोरोना उपचार गर्न फ्रन्टलाइनमा रहेको पाटन अस्पतालमा ६ आइसोलेसन बेड, कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामी राख्न १५ बेड छन्। त्यसैगरी २१ आइसियु र १५ भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
संक्रमण बढेको अवस्थामा ७० बेड तयारीमा अवस्थामा रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन्। बिरामी आउने संख्या पाटनमा पनि घटेको छ। १ हजार ५ सयदेखि २ हजारहाराहारी ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेकोमा आजभोलि २ सयहाराहारी हुने गरेको छ।
‘बिरामी आउने संख्या धेरै नै घटेको छ। आउने बिरामीलाई सेवा दिएका छौं,’ डा. शर्माले भने, ‘कोरोना त्रासका कारण अन्य बिरामी सेवाबाट वञ्चित त हुन भएन नि।’
६ सयहाराहारी बेड रहेको पाटनमा हाल भर्ना भएर १ सय ७१ जना बसेका छन्। अस्पतालमा १ हजार ५ सयहाराहारी कर्मचारी छन्। ‘आकस्मिक , ज्वरो क्लिनिङ, मेडिसिन डिपार्टमेन्ट, आइसियुमा आवश्यक जनशक्ति अस्पताल आउने गरेका छन्,’ डा. शर्माले भने, ‘नचाहिएको डिपार्टमेन्टका कर्मचारीलाई छुट्टी पनि दिएका छौं।’
कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स र अन्य जनशक्ति गरी ४० जना तयार राखिएको उनले बताए।
अस्पतालको कोभिड वार्डमा तीनजना छन्। दुईजनाको कोरोना पोजिटिभ आएको छ। एकजनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।
कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीलाई छुट्टै डेलिभरी कक्ष : परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल
ओपिडीमा संख्या घटे पनि बच्चा डेलिभरीको संख्यामा कमी आएको छैन। दैनिक ५० देखि ६० हाराहारी डेलिभरी हुने गरेको प्रसुती अस्पतालमा कोरोना त्रासका कारण स्त्री रोग, ट्युमर, पाठेघरको उपचार हुने नगरेको अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।
‘हाल दैनिक १ सय ५० हाराहारीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन्। अन्य बेलामा ८ सयजति ओपिडी टिकट बिक्री हुन्थ्यो।
बिरामीले अझै कोरोनालाई बुझ्न सकेका छैनन्,’ डा. गौतमले भने।
उनका अनुसार साधारण बिरामी भए पनि अस्पताल आउन छोडेका छैनन्। ‘टिटानस सुई लगाउन, आइरन चक्की र क्याल्सियम खान अस्पताल धाउनुपर्ने बेला होइन यो,’ उनी भन्छन्, ‘रोगले कसैलाई चिन्दैन।’
अस्पतालका अनुसार बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म टेलिफोनबाट परामर्श सेवा दिइएको छ। दैनिक ३० देखि ३५ जनाले टेलिफोन सेवा लिँदै आएका छन्।
मिति पुग्न लागेको डेलिभरी, पहिला अप्रेसन भएका डेलिभरी, रगत बगेको, पानी बगेको, पेट दुखेको लगायत समस्या भएका बिरामीलाई ओपिडीमार्फत् सेवा दिएको डा. गौतम बताउँछन्।
अस्पतालले ज्वरो आएकालाई अप्रेसन गर्ने छुट्टै कक्ष र कोरोना पोजिटिभ भएका डेलिभरी अप्रेसन गर्ने छुट्टै कक्ष तयार पारेको छ। हाल अस्पतालमा ३ सय बिरामी भर्ना भएका छन्। अस्पतालको कूल बेड संख्या ५ सय छ भने ६ सय ५० जनशक्ति छन्।